Ndekọ Cleaner- Clean / Idozi / Defrag gị ndekọ | Wondershare
The ndekọ na Windows dị nnọọ mkpa na ị na-agaghị kwesịrị ime ka ntuziaka mgbanwe ya. Na-ekwesịghị ịdị mgbanwe wee na-ejere gị na kọmputa inoperable. Ọbụna na e ọ bụla ndekọ redundancy, ndekọ junk faịlụ, ghara ịdị irè registy, emerụ faịlụ na-egosi na ndekọ, ị kwesịrị ị na-achọ enyemaka nke ọkachamara ndekọ Cleaner ọcha ndekọ. Mụtakwuo >>
Idozi Windows ndekọ njehie, akpa i nwere mara ọrụ nke gị ndekọ, nke bụ obi nke na kọmputa gị usoro. Ọ esetịpụ ihe ọmụma banyere windows sistemụ na ndị ọzọ na usoro arụnyere, dị ka onye ọrụ ntọala, software ntọala, ngwaike ọkwọ ụgbọala, sistemụ ntọala, wdg Ya mere, ndekọ nsogbu nwere ike ime ka ụfọdụ njehie gị PC, dị ka onye na-adịghị mmalite-elu, acha anụnụ anụnụ na ihuenyo, njehie ozi, kọmputa kefriza ma ọ bụ ọbụna okuku. Mgbe ahụ, olee idozi ndekọ njehie ma ọ bụrụ na e nwere na kọmputa? Mụta ihe >>
Olee otú na-ebuli Windows Registry na 1 Pịa
Yiri a ụgbọala, ndị na Windows ndekọ nwekwara nwere ya nchekwa. Mgbe anyị na-ewepu ụfọdụ omume, anyị ga-aga ka ihichapụ yiri ntọala na Windows ndekọ. Mgbe e nwere upgrades nke omume, ihe ọhụrụ parameters ga-eme, mgbe ochie omume na-agaghị na-akpaghị aka ehichapụ ma ọ bụ kpuchie. Ya mere ọdịnaya ga-akwakọba ọzọ na ndị ọzọ na Windows ndekọ n'elu oge, nke ọkọkpọhi kọmputa arụmọrụ iji nwayọọ na iji nwayọọ. Na njehie na Windows ndekọ bụ ihe na-akpatakarị nke Windows mkpọka, njehie ozi, wdg optimizing gị Windows XP ma ọ bụ Vista usoro dị oké mkpa n'ịnọgide na-enwe ahụ ike nke na kọmputa gị. Mụtakwuo >>
Defrag gị ndekọ
Ọtụtụ ọrụ maara na e nwere faịlụ iberibe na diski ike, ma ole na ole mara ha rifọrọ nwekwara adị ke ndekọ. N'ezie na ndekọ, dị nnọọ ka ike mbanye, nwere ike inwe ezughi ezu.
Dị ka anyị nile mara na ndekọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị Mmanu components gị Windows usoro n'ihi na ọ comprises nhazi data niile ngwaike ngwaọrụ na software omume arụnyere na gị na PC. Ya mere, ndekọ nwere ike na-emetụta ihe niile na-eji na kọmputa gị. Ka ị na-tinye, wepụ, bee, idetuo na mado na programmụ na faịlụ site na kọmputa gị, ọ na-agbakwụnye ma ọ bụ na-ewepu ọmụma si gị ndekọ. Ndekọ defragmentation-adị mgbe sistemụ apụghị igbunye ezu na-aga n'ihu ohere na Windows ndekọ na-echekwa a zuru ezu faịlụ dị ka a unit, ma, kama na-ewepụta akụkụ nke ya na gaps n'etiti ndị ọzọ faịlụ. Mụtakwuo >>